TOP 10 Abraham Lincoln Quotes Maka 2020 - Quotes Pedia
12 ruturu na okwu
Abraham Lincoln bụ onye isi ala nke 16 nke United States America. Na mgbakwunye na nke a, ọ bụkwa onye ochichi yana onye ọka iwu.
N'oge okwu ya dị ka onye isi ala, ọ duru USA gaa na American Civil War nke a na-eche na ọ bụ nsogbu ndọrọ ndọrọ ọchịchị, usoro iwu na ụkpụrụ omume kachasị na mba ahụ emetụla.
Ọzọkwa, ọ kagbuola ohu ma mezie akụ na ụba mba ahụ. Kemgbe ndụ ya niile ọ na - emetụta mmetụta oge niile gbara ọtụtụ mmadụ ume site n'okwu ya na echiche ya.
Ka anyị leba anya n'ụfọdụ Abraham Lincoln Quotes. O kwuwo, “Gbalịa itinye ụkwụ gị n'ọnọdụ ziri ezi, kwụsie ike”. Nke a pụtara na ọ na-agba mmadụ niile ume ịchọpụta ihe ziri ezi ma jide ihe ha na-eme tupu ikwe nkwa ọ bụla.
Ozugbo anyị họọrọ ma mee uche anyị, ọ dị mkpa ka anyị guzobe ma rapara na nzube anyị. Ọ bụrụ na anyị ahapụ ọnọdụ anyị, anyị agaghị emezu ebumnuche anyị ma ọlị ịchọta nzube na ndụ.
Ọ sịwokwa, "A na m aga ije nwayọ, mana anaghị m aga ije azụ". Site na nke a, ọ chọrọ ịkọwapụta na ọ dị mma ka ị jiri nwayọ laa mana ọ dị mkpa ịghọta na ka anyị na-agabiga na ndụ, anyị anaghị eme ihe ọ bụla na-eme ka anyị laghachi azụ.
Anyị kwesịrị ịhụ na ọbụlagodi na mbọ anyị pere mpe ma na-aga n’ihu nwayọ, anyị na-agbaso ụzọ na-eduga anyị nso iji mezuo ebumnuche anyị.
Ọzọ dị nnọọ Abraham Lincoln Kwuru okwu na-ekwu, "bestzọ kachasị mma ịkọ ọdịnihu gị bụ ịmepụta ya". Nke a pụtara gbaa mbọ mepụta ọdịnihu ịchọrọ maka onwe gị. Edobere ndi ọzọ ma obu ọnọdụ ndi ozo igwa odinihu dika ichoro ya. Kama rụọ ọrụ gị ka ọrụ gị wezie ọdịnihu gị.
Uzo di egwu di egwu emeela ka ndị mmadụ n'ụwa niile na-ele anya ya Lincoln maka mkpali.
Na njedebe, ọ bụghị afọ na ndụ gị ka ị bara uru. Ọ bụ ndụ n'ime afọ gị. - Abraham Lincoln
Anyị na-agụta afọ anyị n'afọ, ọ bụghị ya? Ever chetụla ma ọ bụrụ na nke ahụ bụ ụzọ…
Jide n'aka na itinye ụkwụ gị n'ọnọdụ ziri ezi, kwụsie ike. - Abraham Lincoln
Ndụ na - atụfu anyị n'ọnọdụ dị iche iche. Offọdụ n'ime ha na-anwale ma ọ na-esiri anyị ike…
Thezọ kachasị mma ịkọ ọdịnihu gị bụ ịmepụta ya. - Abraham Lincoln
Ekwuru ya n'ụzọ kachasị mma iji nwee ike ịkọ ọdịnihu gị bụ site na…
Buru n’uche mgbe nile na mkpebi nke gị ime nke ọma dị mkpa karịa otu ihe. - Abraham Lincoln
Ihe kachasị mkpa ị kwesịrị iburu n’uche bụ mkpebi gị. Ọ kwesịrị ịbụ ihe…
Gaghị agbanahụ ọrụ echi site n'ịchụpụ ya taa. - Abraham Lincoln
Mara na n life oge n life b esca la, n gagh i ach oghochagh i mgbe niile. Ọ dị mkpa ịghọta na…
Ahapụ ihe ọ bụla maka echi nke enwere ike ịme taa. - Abraham Lincoln
Ikwesiri idowe ihe ọ bụla maka echi. Onwebeghị onye hụrụ ihe ọ ga-abụ echi. N'ihi ya,…
Ihe ọ sọrọ gị bụrụ, bụrụ ezigbo onye. - Abraham Lincoln
I nweghi ike ịkpụzi ndị mmadụ ka ha bụrụ ezigbo mmadụ, mana ị nwere ike ịbụ otu! Na ọtụtụ ndị mmadụ gburugburu…
Cipdọ aka na ntị na-ahọrọ n’etiti ihe ịchọrọ ugbu a na ihe kacha amasị gị. - Abraham Lincoln
Agaghị m agbagha, m ga-abụrịrị eziokwu. Agaghị m eme ihe ịga nke ọma, mana aghaghi m ebi ndụ ọ bụla n’ìhè m nwere. - Abraham Lincoln
Ndụ bụ ngwugwu nke akụkọ ịga nke ọma agwakọtara ya na ọtụtụ ikpe nke ọdịda. Odi nma ka anyi tufue ozo…
Nye m awa isii ka egbutu osisi m ga - eji anọ ga - ebu ụzọ anyụcha anyụike. - Abraham Lincoln
Ọkwa ị na-akwado na-ekpebi ihe ịga nke ọma gị. Ee, nke ahụ bụ eziokwu! Hardwork ga-akwụ gị ụgwọ. ……
Akụkụ kacha mma nke ndụ mmadụ bụ ndị enyi ya. - Abraham Lincoln
N'ụlọ akwụkwọ, abụwo m onye na - azụ azụ ma mgbe taa, mgbe m lere anya azụ, anaghị m echeta…